» दु:खद खबर !प्याराग्लाइडिङ पाइलट,कराँतेको अनुशासित खेलाडी, प्रशिक्षक एवं रेफ्री सहित रहेका राजु नेपाली आकाशमा उड्दा उड्दै सधैको लागि अस्ताए,हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! दु:खद खबर !प्याराग्लाइडिङ पाइलट,कराँतेको अनुशासित खेलाडी, प्रशिक्षक एवं रेफ्री सहित रहेका राजु नेपाली आकाशमा उड्दा उड्दै सधैको लागि अस्ताए,हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! – हाम्रो खबर
दु:खद खबर !प्याराग्लाइडिङ पाइलट,कराँतेको अनुशासित खेलाडी, प्रशिक्षक एवं रेफ्री सहित रहेका राजु नेपाली आकाशमा उड्दा उड्दै सधैको लागि अस्ताए,हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
पोखरा । सधैं आकाशमा उडिरहने राजु नेपाली उड्दाउड्दै अ’स्ताए। टेण्डम फ्लाइट उडान भर्दै आएका ३८ वर्षीय नेपालीले प्याराग्लाइडिङ उडानकै क्रममा ज्या’न गु’माए । उनको निधनले पोखराको प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रले अनुभवी पाइटल गुमाएको छ। कराँतेले अनुशासित खेलाडी, प्रशिक्षक एवं रेफ्री गुमाएको छ। शारीरिक सुगठनले पदक जित्ने सम्भावना बोकेको खेलाडी गुमायो।
प्याराग्लइडिङको व्यवसायिक उडान सुरु गरेको झण्डै पाँच वर्ष मात्रै भएको थियो। प्याराग्लाइडिङमा उड्नु अघि उनी क्योकुशिन कराँतेका राम्रा खेलाडी हुन्। २०५८ सालमा कराँते खेल्न थालेका हुन्। कराँतेमै आफ्नो खेलकुद करियर सुरु गर्ने क्रममा उनले पोखरा –१७ विरौटा डोजोबाट बेल्ट बाँधे। एक वर्षपछि प्रतिस्पर्धाको एरिनामा उत्रिए।
भर्खरै सिक्दै गरेको जोश र उमंगले ६५ केजी तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा पहिलो सहभागितामै तेस्रो(कास्य) पदक जिते । मनमा उर्जा र हौसला थपियो। माघे संक्रान्तिको बेलामा वर्षेनी कराँते प्रतियोगिता आयोजना हुन्थ्यो । २०६० सालमा उनले दोस्रो पटक एरिनामा उत्रिए। रजत पदक जिते। कराँतेमा उनको करियर अघि बढ्यो।
‘हसिँलो र अनुशासित उनी कराँतेका अग्रज र अनुजसँग निकै मिल्थे’ कराँतेका प्रशिक्षक समेत रहेका दिपक बहादुर गोदारले विगत सम्झिए–‘गुरुप्रतिको सम्मान र व्यवहार भुल्नै सकिन्न। कराँतेमा उनको अमिट छाप छोडेका छन् ।’ २०६८ सालमै धनगढीमा आयो जित छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कराँतेका निर्णायक(रेफ्री)को भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पछिल्लो समय उनी नेपाल स्ट्रोङगेष्ट कराँतेमा आवद्ध थिए। उनी कराँते ब्लाक बेल्ट थर्ड डान हुन्।
सबै खेलप्रति उत्तिकै लगाव थियो। कराँतेसँगै उनी शारीरिक सुगठनतर्फ पनि होमिएका थिए। २०६८ सालमा पोखरामा आयोजित क्षेत्रीयस्तरको शारीरिक सुगठनमा सहभागिता जनाए। तर उनले सफलता भने प्राप्त गरेनन्। बलिष्ठ शरीरका धनी उनले आफैं पनि कराँते को प्रशिक्षक थिए। शारीरिक सुगठनतर्फ आकर्षित हुँदै पोखराको लेकसाइडमा ‘लेकब्रिज’ जिम समेत सञ्चालन गरे।
जिम सेन्टरमै कराँते तथा किक बक्सिङ प्रशिक्षण समेत गराउँथे। जिमसँगै उनको यात्रा प्याराग्लाइडिङतर्फ मोडियो । प्यारा ग्लाइडिङमा टेण्डम उडान गर्न सक्षम भएपछि पाँच वर्षयता टेण्डम उडान गर्दै आएका थिए। उनले पोखराको फिष्टेल प्याराग्लाइडिङ कम्पनी मार्फत उडान भर्ने गर्थे। परिवारले अभिभावक गुमाए। आम्दानीको स्रोत गुम्यो। परिवारको आर्थिक अवस्थामा सामान्य छ। उनकै भरमा परिवार चल्थ्यो। दैनिकमा खबर बाट